वाणिज्य बैंकबीच ब्याजदर घटाउने भद्र सहमति, कहिलेसम्म टिक्ला ? Bizshala -
वाणिज्य बैंकबीच ब्याजदर घटाउने भद्र सहमति, कहिलेसम्म टिक्ला ?
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुले एकआपसमा मिलेमतो गरी नयाँ व्याजदर कायम गर्ने समझदारी गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स सङ्घको आजको बैठकले व्यक्तिगत बचत खातामा पाँच प्रतिशतसम्म व्याज दिने समझदारी गरेका हुन् । बैठकमा २८ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सहभागिता थियो ।
यस्तै व्यक्तिगत मुद्दती खातामा नौ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती खातामा भने १० प्रतिशतसम्म व्याज दिने भएका हुन् । केही बैंकले निक्षेप तान्न भन्दै बचत खाता र मुद्दती खातामा बढी व्याज दिन थालेका थिए । त्यसबाट बचतकर्तालाई भने फाइदा भएको थियो ।
नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले व्याजदरमा केही सामान्य समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र संवद्ध बैंकका सरोकारवालाबीच भइरहेको छलफलको निरन्तरताका क्रममा आज सङ्घको बैठक बसेको बताउनुभयो ।